Video:-Madaxweyne Gaas oo khudbad qiimo badan ka jeediyay shirka Tana Forum – Idil News
Video:-Madaxweyne Gaas oo khudbad qiimo badan ka jeediyay shirka Tana Forum
Posted By: Jibril Qoobey April 24, 2017
Madaxweynaha Dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalintii labaad ka qayb galaya shirka Madaxdda Africa ee Tana High Level Forum ayaa khudbad muhiima ka jeediyey shirkaasi oo ka dhacayey magaalada Bahar Daar ee dalka Ethiopia.
Madaxweynuhu wuxuu khudbadiisa kaga hadlay khayraad dabiici ah ee cagaaga qaarada Afrika , isagoo kula taliyey madaxdda ka soo qayb gashay shirka inlaga Faa’iidaysto khayraadkaasi.
‘’Macdanta Africa waa qani dhinaca khayraadka dabiiciga ah sida saliidda ceedhiin oo ay ka mid yihiin shidaalka iyo gaaska, laakiin waxaan u baahanahy inaan helno hogaamiyayaal wanaagsan oo fahmi kara khayraadka faa’iidadiisa, hadaynaana hada ka faa’iidaysan oo la soo bixin, waxaa dhici karta in wakhti dhaw laga baxo is ticmaalkiisa, waayo hadaynu nahay dadka kunool Qaaradani Africa ma isticmaalo Technology-yada cusub ee maanta aduunka laga isticmaalo, caalamka intiisa kalena waa kusii horumaraysaa maalinba maalinta kadan beysa’’ ayuu yiri madaxweynaha Dawladda Puntland.
Madaxweynaha oo ka hadlaya dhinaca amaanka Qaarada afrika ayaa qeexay in loo baahan yahay in layska kaashado amaanka guud ee Qaarada,isla markaana lays dhaafsado xogo ku saabsan dhinaca amaanka si loo sugo.
‘’Waa mihiim in layska kaashado amaanka guud ee Qaarada, isla markaana lawadaago xogo ku saabsan amaanka kuwaas oo khuseeya ilaalinta iyo xasiloonida wada noolaansho ee dadka kuwada nool Qaaradani qaniga ah, huru marku wuxuu ka dhashaa oo saldhig u ah nabada, nabadana waxaa suura gelinkara xidhiidhka wadamada Africa oo hagaaga’’ ayuu yiri madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Gabagabadii, Madaxweyne Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya maanta ku heelan tahay geedina ugu jirto horumarka, isla maarkaana doonayso inay dib uga soo kabato wixii hore usoo maray, hadana ay ka jirto siyaasad wanaag kala danbayn, is ixtiraan iyo dib u doonid Qaranimo Soomaaliyeed,hoos ka daawo muuqaalka.